Roa taona niasan'i Tim Cook ho CEO an'ny Apple | Vaovao IPhone
Roa taona izay no lasa tamin'i Tim Cook izay lohan'i Apple. Niakatra tamin'ny toeran'ny Chief Executive Officer (na CEO) izy tamin'ny 24 aogositra 2011, taorian'ny nialan'i Steve Jobs ary nanondro an'i Cook ho mpandimby azy. Raha toa ka lohan'ny orinasa hita maso manana ny fiatraikany betsaka indrindra amin'ny haino aman-jery ary iray amin'ireo manandanja indrindra eto an-tany dia tsy tokony ho asa mora, satria ny mpandimby an'i Steve Jobs, mpanorina ny Apple ary iray amin'ireo olona manan-danja indrindra ao amin'ny izao tontolo izao hatreto dia tsy tokony hanamora na inona na inona. Mandinika ireo fotoana tena lehibe indrindra izahay an'ny orinasa mandritra io vanim-potoana io.
1 Olana ao Foxconn
2 IOS 6 Sarintany
3 Fikorontanan'ny tsena
4 Fiovana eo amin'ny tabilao fandaminana
5 Fandefasana ny iPad Mini
6 Roa taona tsara ho an'i Apple
Olana ao Foxconn
Foxconn no mpanamboatra lehibe indrindra miasa amin'ny Apple. Nandritra ny fotoana elaela, ny mpanamboatra sinoa dia manasongadina ny olan'ny mpiasa ao aminy. Ny fiampangana ny fanararaotana sy ny toe-piainan'ny mpiasan'ny mpiasa dia niitatra taoriana kelin'ny nitondran'i Cook ny asany. Apple dia namaly haingana ary nanokatra ny orinasa ho an'ny Fair Labor Association ary ny tatitra farany dia milaza izany mihatsara ny fepetra.
IOS 6 Sarintany
Ny famoahana ny iOS 6 tsy misy Google Maps ary miaraka amina fampiharana vaovao azy manokana, Maps, fa tena horohoron-tany tany Cupertino. Ny tsy fahombiazan'ny fampiharana navoakan'i Apple miaraka amin'ny rafitra fiasa vaovao dia nodinihina, ary ny vaovao momba ny lesoka teo amin'ny toerana misy toerana mahaliana sasany dia niseho tamin'ny fampahalalam-baovao manerantany. Apple dia namoaka taratasy ho an'ireo mpampiasa azy rehetra mangataka famelana, ary Scott Forstall, iray amin'ireo tian'i Steve Jobs, ary ny lohan'ny sehatra iOS mandra-pahatongan'izany dia voaroaka. Nanomboka teo dia nihatsara ny fampiharana ary toa nifantoka tamin'ny fividianana orinasa kely hanatsarana ny serivisy Maps ny Apple.
Na eo aza ireo teoria mahatsiravina nanambara ny fitrangan'i Apple noho ny fanjavonan'i Steve Jobs, ny fizarana amin'ny tsenambola sy ny tarehimarika ara-toekarena nasehon'ilay orinasa dia nampiseho fa natanjaka kokoa noho ny hatramin'izay i Apple. Tamin'ny volana septambra dia tratra ny sandan'ny tsena avo indrindra amin'ny tantarany, miaraka amin'ny $ 700 isaky ny anjara. Ny tarehimarika momba ny varotra ho an'ny iPhone 5 tamin'ny herinandro voalohany dia namaky firaketana, miaraka amina singa 5 tapitrisa mahery amidy. Saingy nanomboka tamin'io fotoana io dia nahagaga ny fianjeran'ny tsenambola, nahatratra isa ambany 400 $ ny anjarany. Ilay oram-baratra namely an'i Apple teny an-tsena dia toa nifehy, ary ny sandan'ny tsena amin'izao fotoana izao dia manodidina ny $ 500 isaky ny anjarany, eo anelanelan'ny haavon'ny 700 sy ny sandam-bola nananany fony i Tim Cook nanjary ilay adiresy, ambanin'ny 400 $.
Fiovana eo amin'ny tabilao fandaminana
Tao anatin'izay roa taona izay dia be ny fiovana teo amin'ny tabilao fandaminan'ny Apple. Angamba ny malaza ratsy indrindra dia ny fialan'i Scott Forstall, tompon'andraikitra tamin'ny iOS nandritra ny taona maro, ary rain'ny "scheumorphism" an'io lampihazo io mandra-pahatongan'izany fotoana izany. Fa ny fialany nanamarika ny fahatongavan'i Jony Ive, ary hatramin'ny fotoana voalohany dia azo antoka fa miaraka aminy, hanova tanteraka ny endriny ny iOS, araka ny naseho tamin'ny fampisehoana ny iOS 7.
Fandefasana ny iPad Mini
Ny vokatra voalohany (ary hatreto ihany) vokatra vaovao natombok'i Tim Cook dia ny iPad Mini. Na eo aza ny tsikera ataon'ny mpandinika maro aorian'ny fampisehoana azy, ary ny fanantenana tsy mendrika noho ny fikajiana "mahantra" araky ny lazain'ny maro, dia nampiseho ny tarehimarika momba ny varotra fa takelaka 7,9-inch an'ny Apple fahombiazana tamin'ny fivarotana izany. Ny habeny, ny hazavany ary ny vidiny aza dia nanala ny iPad Retina tsitoha.
Roa taona tsara ho an'i Apple
Ho famaranana dia afaka miteny isika fa Apple dia nanohy nitombo niaraka tamin'ny mandan'i Tim Cook. Na eo aza ireo fambara ratsy izay manizingizina ny hamoahana isan'andro ny Apple dia orinasa matanjaka kokoa i Apple roa taona taorian'ny naha-CEO an'i Cook. Saingy tamin'ity taona lasa ity tsy misy vokatra vaovao no mahatonga ity fianjerana ity hamaritra kokoa noho ny tamin'ny taona hafa rehetra. IPhones vaovao, iPad vaovao, rindrambaiko vaovao ary iza no mahalala raha ny hafa vokatra vaovao andrasana kokoa noho ny hatramin'izay, ary Cook dia tsy maintsy miatrika ny iray amin'ireo fanadinana manan-danja indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ho hitantsika eo raha efa nanao ny enti-modinao ianao tamin'ny taon-dasa ary nandalo ny fanadinana tamin'ny loko manidina.
Fanazavana fanampiny - Ny hetsika 10 septambra amin'ny sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Roa taona niasan'i Tim Cook ho CEO an'ny Apple
Raha avelanao hanao fanomezana kely aho dia heveriko fa nanadino zavatra tena manan-danja izay notanterahin'i Tim Cook ianao. Amin'ny lafiny iray, ny tanjon'ny orinasa dia niova be, na ny tena izy, nanitatra azy io. Ho an'i Teve Jobs, Apple dia endrika iray an'ny "Manana nofinofy aho" ary nitondra izany hatrany amin'ny fandavana ny famelana ny tombom-barotra handeha amin'ny ampahany amin'ireo mpandray anjara fa kosa hanamafy orina sy hampitombo an'i Manzana. Ny iray amin'ireo fanapahan-kevitr'i Tim voalohany dia ny famoahana, raha tadidiko tsara, 45 tapitrisa dolara eo ho eo ny dividends mivantana ho any am-paosin'ny tompon-trano ary avy eo dia nitombo hatramin'ny 700 $ ny anjarany. Apple dia nahazo tombony ary noho izany dia manintona kokoa noho ny taloha.
Ny fiovana hafa dia ny fitsaboana nomen'i Tim ny mpiasany manokana, ny tiako holazaina dia ny mpiasan'i Apple fa tsy ireo orinasa ivelany toa an'i Foxcomm izay notanisainao. Nanome fialantsasatra ho an'ny mpiasa i Tim, zavatra tsy mahazatra ao amin'ny orinasa amerikana avaratra ary toa nanatsara ny fepetra amin'ny fahazoana ny vokatra Apple ho an'ny mpiasa ao aminy ihany koa.
Fanamarihana kely izay noheveriko fa mahaliana ny maka azy
Comunio Manager, safidy tsara indrindra hitantanana Comunio amin'ny iPhone-nao
Mikey Hooks, lalao an-tsehatra izay tsy hainao ny mitsahatra manandrana